महिनावारीमा यौनसम्पर्क गर्दा के हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस | Indrenionline.com
ओछ्यानमा पल्टिने बितिक्कै म आफैलाई सुख र सन्तुष्टिको स्वाँस फेरिरहेको पाउँछु । यसको कारण छ, म मेरो प्रेमिसँग गज्जबको यौन सम्बन्ध राख्दै आएकी छु । म उसँग एकदम निकटता महसुस गर्छु । उसँग कहिल्यै नटुट्ने बन्धन छ । उसँग रहदाको अनुभवमा जुन प्रबलता छ, त्यसलाई मजाले महशुस गुर्छ । ति स्वर्णिम पलहरुको याद गर्दा निःशब्द हुन्छु ।
मेरो प्रेमी र म छमहीना सँगै रह्यौं । हप्ताको अन्तिम दिन त सधै एकसाथ हुन्थ्यौं । उनीसँग विताएका ति पल सधै अमिट भएर मसँगै छन् । सुवागरातको समयमा गरिएको यौनसम्पर्कको त कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ । वर्णन गर्न मुस्लिक हुन्छ । एउटा अर्को कुरा छ, जसका बारेमा सोच्नै गाह्रो हुन्छ । महिनावारीको बेलाको समय एकदम आनन्दायी रह्यो ।
म महिनावारीको बेला यौनसम्पर्क गर्ने विषयमा कहिल्यै असहज रहिन् । २० देखि २९ वर्षको उमेरसम्म हरेक महिनाको एक साता यौनसम्पर्क गर्नबाट बञ्चित रहदै आए । मेरो पहिलो प्रेमि १० वर्षको उमेरमा यौन सम्पर्कका लागि आँतुर थियो । तर मलाई यो सहज लागेको थिएन् ।
अहिले म सन् २०१८ मा छु । र अहिले महिनावारीका समयमा यौन सम्पर्क राख्ने विषयमा वकालत गर्ने समूहको पक्षमा उभिएकी छु । बढ्दै गएको उमेर आत्मविश्वासले मलाई यस्तो प्रश्न गर्न कुनै अप्ठ्यारो लाग्दैन, यौन सम्पर्कबाट के चाहन्छु ?
म यौन सम्पर्क राख्न खुब मन पराउने गरेको कुरा विस्तारै थाहा भयो । अहिले महिनावारीको समयमा पनि यौनसम्पर्कको आनन्द लिन्छु । कति पटक त महिनावारीको समयमा धेरै आनन्द लिएकी छु ।
महिनावारीको समयमा यौनको आनन्द लिन म एक्ली होइन । एक सर्वेक्षणमा सहभागि पाँचसय जनामध्ये ५५ प्रतिशतले महिनावारीको समयमा यौनसम्पर्क सहज भएको बताएका छन् । उनीहरु कसैले पनि समस्या भएको जवाफ दिएका छैनन् । सर्वेक्षणमा सहभागि ४५ प्रतिशतले यो ठीक नभएको बताएका छन् ।
महिनावारीको विषयलाई लिएक कयौं अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन् । ति अध्ययनमा सहभागि महिलामध्ये ४५ प्रतिशतले महिनावारीको समयमा झन बढी उत्तेजित महशुस गर्ने गरेको बताएका छन् ।
तैपनि अध्ययनकर्ताहरुले यसका बारेमा स्पष्ट रुपमा केही भनेका छैनन् । र म यो जान्दछु र बुझ्दछु कि महिनावारीको समयमा यौनसम्पर्क के हो । यसको अनुभव र महशुस गर्ने म एक्ली भने होइन् ।
२८ वर्षीया क्याथरिनले महिनावारीको समयमा यौनसम्पर्कको आकाक्षां अन्य दिनको भन्दा बिलकुल अलग हुन्छ । उनले भनिन्, “केही कुरामा धेरै संवेदनशील हुन्छु । यो धेरै उत्तेजित हुदैन् । विशेष गरेर फरक फरक पोजिसनका विषयमा सकतर्क हुन्छु । यो बेला अन्तरंगको जरुरत हुन्छ ।’
महिनावारीको समयमा सबै महिलाको एउटै इच्छा हुदैन् । केही महिला आराम गर्न चाहन्छन् ।
मलाई युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ रिचेल न्युमानले यौन सम्बन्धका बारेमा बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन, “यौन सम्पर्कका बेला अक्सिटक्सिन निस्किन्छ । यो ‘बोन्डिङ’ हर्मोन हो । यो हर्मोन प्रसवका बेला पनि निस्किन्छ । यसले दुखाइबाट राहत दिन्छ ।”
उनले भनेकी थिइन, “यति तपाईले अझ बढी यौन सुख हासिल गर्नसक्नु भयो भने तपाईको शरीरले अझ धेरै रिल्याक्स महशुस गर्छ । त्यही हर्मोनका कारण दुखाइ र पीडातिर ध्यान जादैन् ।’
अनुसन्धाता अना द्रुतले भनेकी छन्, महिनावारीका समयमा पीडा र दुखाइ महशुस हुनु स्वाभाविक हो । यौनसम्पर्कका बेला निस्किने इन्ड्रोफिन्स हर्मोनले महिनावारीका बेला हुने पीडा र दुखाइलाई कम गराउँछ । तथापि यो सबैमा लागु नहुन सक्छ ।
महिनावारीका समयमा एउटा कुार त सबैका लागि सही हुन्छ । यो सयमा ‘लुब्रिकेटेड सेक्स’ हुन्छ । अझ महिनावारीका समयमा नुहाउने बेला यौनसम्पर्क गर्न महुत आनन्द आउँछ । नुहाउने बेला फोहोर हुने डर पनि हुदैन् ।
महिनावारीको समयमा धेरैजसोमा मानिसको अनिच्छा फोहोरका कारण हुनछ । यो बेला रक्तस्राव सामान्य हो ।
स्त्रीरोग विशेषज्ञ रिचेल महिनावारीको समयमा यौनसम्पर्क गर्दा रक्तस्राव पनि कम हुनसक्छ । उनले भनेकी छन, ‘महिनावारीको बेला यौनसम्पर्क राख्ने महिलाको महिनावारीको समय छोटो हुन्छ ।’
उनी महिनावारीको बेला यौनसम्पर्क सहज बनाएर राख्नुपर्ने बताउँछिन् । यो बेला धेरै प्रयोग गनुहुदैन् । सामान्य रुपमा यौनसम्पर्क राख्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, यौनसम्पर्कका विषयमा सबैको आ–आफ्नै अनुभव हुन्छ । यसमा कसैले भनेकै आधारमा केही भन्न सकिन्न् । तैपनि म मेरो अनुभवका आधारमा भन्न सक्छु, महिनावारीको समयमा यौनसम्पर्क असमान्य कुरा होइन । एभरेष्ट दैनिकबाट
१७ माघ २०७४, बुधबार १९:२१
Previous: तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वैठक यस्तो निर्णय गर्यो
Next: सरसफाइमा जुटे बिद्यार्थी नेता